न्यायाधीश गिरीशचन्द्र : ‘जिस के आगे राह नहीं है’ ! 'बनाए जा बिगारे जा, बिगारे जा बनाए जा' - Nepal News - Latest News from Nepal
५ असार, काठमाडौं । चारदलवीच जेठ २५ मा सम्पन्न १६ बुँदे सहमतिलाई असंवैधानिक करार गर्दै परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल फेसबुकमा केही न केही लेखिरहन्छन् ।
नेपाल र भारतका धामहरु घुमिरहने न्यायाधीश लालले फेसबुकमा पोस्ट गरेको आफ्नो एउटा तस्वीरमा लेखेका छन्- जिस के आगे राह नहीं है । अर्थात, जसको अगाडिको बाटो छैन ।
शुक्रबारको परमादेशपछि साँच्चै नै न्यायाधीश लालको ‘अगाडिको बाटो’ अनिश्चित बनेको छ । अब सरकारले भ्याकेटका लागि निवेदन दिएपछि अदालतले गिरीशचन्द्रलाई बोक्छ या ठोक्छ ? त्यो हेर्न लायकको विषय बन्नेछ । अदालतले यदि लालको परमादेशलाई उल्टायो भने सायद उनको फेसबुक स्टाटस सार्थक हुनेछ ।
मेलमिलाप गराउने मान्छेले नै झगडा लगाए
गिरीशचन्द्र लाल भावी प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठपछिका बरिष्ठ न्यायाधीश हुन् । आगामी पौष २० गते अवकाश पाउने स्थिति नभएको भए लाल प्रधानन्यायधीशको लाइनमा समेत पर्ने व्यक्ति हुन् । तर, आफ्नो ६६ औं बर्थ डेको ठीक अघिल्लो दिन उनी रिटायर्ड हुँदैछन् ।
न्यायाधीश लाल सर्वोच्च अदालतमा मेलमिलापसम्बन्धी प्रमुखसमेत हुन् । मेलमिलापबारे उनले देशभरि डुलेर कानूनविदहरुलाई तालिमसमेत दिँदै आएका छन् । तर, शुक्रबारको आफ्नै आदेशमा भने उनले बनिसकेको मेलमिलापको वातावरणमा चिराग सल्काउने काम गरे ।
विगतमा गिरीशचन्द्र आफैंले गरेको फैसलामा अदालतले राजनीतिक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न नहुने भनिएको थियो । तर, अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने ठाउँमा गिरीशले एक कदम अघि बढेर परमादेश जारी गरे, जसले राजनीतिमाथि हस्तक्षेप गर्‍यो ।
‘जिउँदो सहिद’ बन्ने खतरा
सर्वोच्च अदालतले यति महत्वपूर्ण संवैधानिक विवादलाई एकजना मात्रै न्यायाधीशको बेञ्चमा पारेर जुन आदेश सुनायो, यसले सर्वोच्च अदालत विवादमा तानिएको छ ।
अब सर्वोच्च अदालत यो आदेशबाट पछि हट्छ या यसैमा टिक्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ । यति अदालतले गरीशचन्द्र लालको आदेशलाई सच्यायो भने लालका लागि यो निर्णय अवकाश पाउनुभन्दा ६ महिनाअघिको सबैभन्दा बदनाम घटना बन्नेछ । तर, अदालतले लालको पक्षमा खुट्टा टेक्यो भने गिरीशचन्द्र अर्को ‘विश्वनाथ उपाध्याय’ बन्नेछन् ।
एक महिना अगाडिमात्रै न्यायाधीश लालले फेसबुकमा लेखेका थिए- चाहे आश होस वा त्रास दुबै समयमा मानिसले ईश्वरलाई सम्झन्छ। त्यसैकारण एउटा फकीरले गाएको यो गीत प्रासांगिक भएको छ, ‘बनाए जा बिगारे जा, बिगारे जा बनाए जा। कि हम तेरे चराग हैं, जलाए जा बुझाए जा ।’
हुन पनि अब गिरीशचन्द्रको छवि बिग्रने या बनिने भन्ने कुरा ईश्वर अर्थात (सर्वोच्च अदालत) को हातमा छ । बनाऊ या बिगार । बिगार या बनाऊ । गिरीशचन्द्र त दाउरो मात्रै हुन्, जलाऊ या बुझाऊ ।
यतिबेला प्रमुख दलका नेताहरुबाट न्यायाधीश लाल आलोचनाको शिकार बनेका छन् । तर, न्यायाधीश लाल पनि नेताहरुप्रति कम त्रिटिकल छैनन् । उनले फेसबुकमै लेखेका छन्- संस्कृतमा एउटा भनाइ छ ‘नोदयाय विनाशाय बहुनायकता ध्रूवम्’ अर्थात धेरै नेता भएपछि उन्नति हुँदैंन बरू विनाशतिर जान्छ। यो कुरा हामी कहाँ लागु नहोस् सबै मिली ईश्वरसंग प्रार्थना गरौं ….।
– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/06/290332/#sthash.9l0IoEvZ.dpuf